I-Luxury Hideaway kufuphi neComo kunye neMilan
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguFabio&Isabella
Indlu entle ezimeleyo ehlaziyiweyo ngokupheleleyo ngaphakathi kwepaki yabucala enesango elingaphezulu kwe-70,000 sqm. Ibekwe ngokufanelekileyo. Kwisiqingatha seyure ungafika eMilan, echibini laseComo, eVarese okanye kwisikhululo seenqwelomoya saseMalpensa. Isikhululo sikaloliwe kumgama wokuhamba.
Indlu, eyaqala ngo-1860, iye yahlengahlengiswa ngokupheleleyo kwindawo ephezulu kakhulu
umgangatho kwaye isetelwe kwimigangatho emibini:
kumgangatho ophantsi kukho indawo yokungena, igumbi lokuhlambela elinye elincinane, ikhitshi elivulekileyo elinesicwangciso esivulekileyo kunye nendawo yokutyela evula kwindawo entle yokugcina izinto.
Kumgangatho ophezulu kukho igumbi lokulala elikhulu elinegumbi lokuhlambela eliphambili kunye nelinye
igumbi lokulala elincinci elidibeneyo elikhokelela kwi-balcony kunye ne-staircase yangaphandle eyenziwe ngamaplanga. Sinokwamkela ukuya kuthi ga kwi-3 yabantu abadala abaleleyo kunye nethuba lokubeka ibhedi yomntwana omncinci.
Yomibini imigangatho ebandakanya i-conservatory ixhotyiswe nge-air conditioning kunye nokufudumeza ngaphantsi.
Kwinqanaba elingaphantsi (elifikelelekayo nge-staircase yangaphandle) kukho enye
igumbi lokuhlambela, igumbi lenkonzo kunye nendawo enkulu yokugcina.
Ipropathi yonke yesango ikumda osezantsi wepaki yengingqi "Pineta" apho iklabhu yeGalufa "La Pinetina" ilele. Intaphane yezibonelelo zemidlalo ziyafumaneka kufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Fabio&Isabella
Worlwide travellers and hosts!!! We are a dynamic family that loves to travel. We try our best to make sure all our guests can enjoy their privacy surrounded by nature.
I-cottage izimele ngokupheleleyo kwaye yangasese. Sihlala ngaphakathi kwepaki kwi-villa enkulu, malunga ne-300 mt kude.